Daawo muuqaalka: Shir uga furmay Garoowe golaha fulinta ee Ururka Siyaasadeeka Horseed |
Daawo muuqaalka: Shir uga furmay Garoowe golaha fulinta ee Ururka Siyaasadeeka Horseed
Waxaa maanta hoolka shirarka ee Hotel Rugsan magaalada Garowe ka furmey shir ay leeyihiin xubnaha golaha fulinta ee urur siyaasadeedka Horseed,waxaana ka qayb-galay gudoomiyaha ururka Horseed Cabdiraxman Shiikh Maxamed Farole iyo labada ku xigeen ee Cabdisamad Cali Shire iyo Cabdirashiid Maxamed Xirsi.
Ajandaha shirkan ayaa la shaaciyey inuu yahay Ka doodista ku talagalka miisaaniyada ururka 2013,magacaabista guddi soo diyaariya xeer hoosaadka ururka,furitaanka xafiisyada dhiman ee ururkam,dhamaystirka gudiyada fulinta ee heer gobol iyo degmo,udiyaargarowga ololaha doorashooyinka golayaashaa deegaanka.
Gudoomiyaha Ururka Horseed ayaa ka hadley kulanka wuxuuna sheegey in shirku uu yahay midkii kowaad ee goluhu isugu yimaado tan iyo wixii ka danbeeyey shirweynihii Ururku ku doortey hogaankooda, isagoona sharaxey geedi socodka nidaamka Asxaabta ee Puntland dooneyso in ay ku talaabsato.
C/raxmaan Faroole waxa uu sheegey in howshan Axsaabtu aysan ahayn mid maalin kaliya lagu fekerey , balse ay tahay mid silsilad ah oo xiriirsaneyd,wuxuuna carabka ku dhuftey in uu aaminsan yahay howl adag oo barnaamijkan laga soo qabtey intii uu socdey , islamarkaana qorshaha laga damacsan yahay uu yahay sidii loola jaanqaadi lahaa qaabka ummadaha adduunku ku nool yihiin.
Shirka maanta u furmay Ururka Horseed ayaa socon doona laba maalmood
Halkaan hoose ka daawo sida uu u furmay shirkaani